Sangano Re Zifa Romirira Bvumo Yekuti Murairidzi Mutsva VaTom Saintfeit Vatange Basa
Mbudzi 08, 2010
Nhengo yeboard yesangano re Zimbabwe Football Association, kana kuti ZIFA, vaBenedict Moyo, vanoti sangano ravo richakamirira kunzwa kubva kubazi rezvemukati menyika pamusoro pemapepa ekushanda emurairidzi wemaWarriors, Tom Saintfiet, uyo akadzingwa munyika achinzi ange asina mvumo yekushanda mushure mekunge apihwa basa iri ne ZIFA.
Zimbabwe yakatarisana nemutambo wekuedzana simba neMozambique svondo rinouya, uye chikwata chema Warriors chinofanirwa kutanga gadziriro yacho.
Dambudziko rakatarisana ne ZIFA rinoitikawo apo musangano umu musina kumira zvakanaka, zvichitevera kudzingwa basa kwe muzvare Henrietta Rushwaya, sa Chief Executive weZifa zvichitevera kusafambisa zvinhu zvakanaka musangano iri. Nyaya yekudzingwa kwamuzvare Rushwaya ichiri kuzeyewa sezvo vakakwidza nyaya iyi kubazi rinowona nezvekodzero dzevashandu re Labour svondo rapera. Nyaya iyi yakanzi iende kumunyananisi kunyangwe zvazvo parizvino muzvare Rushwaya vakatomira basa.
MaWarriors arikutarisira kutamba mutambo wekuMaputo vachitungamirwa nava Madinda Ndlovu kunyangwe sangano re Zifa rinetarisiro yekuti mapepa ava Saintfeit achange abuda pachatamba zvikwata zviviri izvi.
Hurukuro NaVa Benedict Moyo